नेकपाको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला कमिटी घोषणा
काभ्रेपलाञ्चोक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जिल्लास्तरीय नेतृत्व चयन हुन समय लाग्ने भएपछि जिल्ला पार्टी कार्यालयले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका पदाधिकारी रहेको जिल्ला कमिटी घोषणा गरेको छ ।
बैठकले साविक एमालेका जिल्ला इञ्चार्ज ईश्वरी रिजाल, जिल्ला अध्यक्ष टोकबहादुर वाइबा, उपाध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु, सचिव नारायण पाण्डे र उपसचिव इन्द्रबहादुर तामाङ तथा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इञ्चार्ज सूर्यमान दोङ, सहइञ्चार्ज तेजबहादुर मिजार, गङ्गाबहादुर दोङ, दीनानाथ गौतम र जिल्ला संयोजक रुकु चौलागाई रहेको कमिटीलाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीयस्तरका पार्टी कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न उक्त कमिटीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएकोे पनि कार्यालय सचिव वसुन्धरा हुमागाईंले जानकारी दिइन् ।
सल्लाहकारलाई डा. संग्रौलाको सुझाव : प्रधानमन्त्रीलाई सहि कुरा भन्न चुक्नु भो !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले देशमा गणतन्त्र र संविधान उल्टाउने खेलमा विदेशी शक्तिहरु सक्रिय भइरहको बताएका छन् । डा.भट्टराईले फेसबुक मार्फत् उनले वर्तमान व्यवस्था उल्टाउन
पार्टी एकताको दस्तावेजबाट जो कोही पछि हटे पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ : प्रचण्ड
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता ढिला भए पनि सफलताका साथ सम्पन्न भएको बताएका छन् । नेकपा चितवनको प्रथम बैठक तथा शपथग्रहण कार्यक्रमलाई आज यहाँ
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेपाल किसान महासंघले पूर्णता पाएको छ । नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम संयोजक रहेको महासंघले पूर्णता पाएको हो । महासंघका संयोजक गौतम र सह–संयोजक क.चित्रबहादुर
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक प्रतिवेदन शीघ्र सम्पादन र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रतिवेदनलाई